🥇 Ukwenza ingxelo kunye nokulawulwa kwezothutho
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 4
Ividiyo yobalo-mali kunye nolawulo lothutho
Uku-odolwa kwengxelo kunye nolawulo lothutho
Ukwenza ingxelo ngezothutho ngenkqubo yethu ye-USU-Soft kwindalo iphela kukunceda ugcine phantsi kolawulo lwayo yonke imiba ephambili yenkampani! Umbutho kunye nolawulo lothutho lwenziwa kwinkqubo enye yolawulo lolwazi. Bonke abasebenzi benkampani baya kusebenza kuyo njengenxalenye yekhonkco enye yetekhnoloji. Inkqubo yobalo-mali yolawulo lwezothutho ibonisa ulwazi kokubini kwimeko ye-odolo nganye evela kubaxhasi, kunye nendlela ezi-odolwe ngayo. Kwinkqubo yolawulo lwezothutho amalungelo athile okufikelela anikwa umsebenzisi ngamnye. Imigaqo yokusebenza kunye neendlela zolawulo lwenkqubo yobalo lweendlela zothutho zinokwahluka ngokuxhomekeka kubathengi: inokuba kukulawulwa kwezithuthi zothutho, kunye nolawulo lwezothutho ezindleleni, kaloliwe, njl.
Umntu kufuneka agcine engqondweni ukuba ezothutho accounting nazo zinempawu zazo. Ulawulo lwezothutho lunokungqamaniswa newebhusayithi yenkampani kunye nezinye iinkqubo ezahlukeneyo. Ukuzenzekelayo kokuhamba kwabantu kunye nokuthuthwa kwempahla ngowona msebenzi ubalulekileyo kuwo nawuphi na umphathi, kuba iiodolo, ingeniso yombutho kunye nembeko yeenkampani ezisebenzisanayo zixhomekeke koku!
Ulawulo lwezothutho luqala ngokusebenzisana nabathengi. Isicelo esisinikelayo sineseti yezixhobo zonxibelelwano nabaxhasi. Ngenxa yoko, unokunikezela ngeenkonzo zakho ngeyona ndlela ifanelekileyo, ubashiya bonke benelisekile. Kukho ithuba lokubhalisa abathengi ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko, njengenombolo yoqhakamshelwano njalo njalo. Oku kukuvumela ukuba unxibelelane nabathengi bakho, kunye nokucwangcisa iintlanganiso kunye nothethathethwano. Ulawulo lwezothutho lwezothutho kunye nenkqubo yolawulo lwe-USU-Soft iqinisekisa ukuba isicelo ngasinye asishiywa singahoywanga, njengoko nganye kuzo iphawulwe ngemeko: eyokuqala, eqhubekayo, yokwala, egqityiweyo. Unokongeza amanqanaba amaninzi ongezelelweyo ngokwesicelo somthengi. Ugcino-zincwadi oluzenzekelayo lokuhamba kwamazwe ngamazwe kubandakanya ukwenziwa kwamaxwebhu ahlukeneyo: izicelo, iikhontrakthi, njl. Ukufakwa kwenkqubo yocwangciso-mali kulawula kakhulu kunegalelo ekwandiseni iwonga lombutho wakho.
Ulawulo lombutho kunye nesicelo se-USU-Soft sikwabonelela ngethuba lokulawula zonke iinkqubo zomsebenzi. Ulawulo lwezezimali ngokuqinisekileyo luya kuba nempumelelo ngakumbi ngokufakwa kwenkqubo yocwangciso-mali yolawulo lwezothutho. Ukongeza kuseto lweempawu ngokubanzi, sikwabonelela ngamathuba awahlukeneyo. Unokuzikhuphelela ucwangciso lwasimahla kwiwebhusayithi yethu Inkqubo yobalo-mali yolawulo lwezothutho inika ukufikelela ngokulula kulawulo lwengxelo, oluya konyusa ukusebenza kwayo yonke imisebenzi yeshishini. Ukuzenzekelayo emsebenzini kunye nesicelo sethu kwandisa umsebenzi wabasebenzi, oya kuba nefuthe elihle ekunyuseni ukukhuthaza kwabo. Inkqubo yokwenza ezo nkqubo zolwazi ziphambili ngumsebenzi onoxanduva nothatha ixesha. Sikunika imveliso ekumgangatho ophezulu! Uhlalutyo lolawulo olwenziwe kwinkqubo yolawulo lobalo-mali lubonelela ngomfanekiso weenjongo zomsebenzi ngamnye. Uphuhliso lwesicwangciso seshishini luyaphumelela ngakumbi kwaye lulungelelwaniso xa kusetyenziswa inkqubo yolawulo lobalo. I-Excel accounting yeempahla ayithembekanga kwaye indala nefashoni yangoku kwishishini. Inkqubo yolawulo lobalo-mali ayikuvumeli ukuba usebenze ngolwazi, kodwa iphinde igcinwe kwindawo yokugcina izinto okoko ufuna.
Ukongeza abasebenzisi abatsha kunye nokunikezela amalungelo okufikelela akuyona inkqubo ende kwaye inzima. Inkqubo yolawulo lwezothutho yolawulo ibandakanya ukubalwa kwemali kwicala lesicelo ngasinye. Ukuba ufuna ukubhalisa nakuphi na okunye ukuthengiselana kwemali okungadibananga nesicelo esithile ungakwenza ngokulula ngoncedo lwenkqubo yethu. Isoftware yobalo inezinye izinto ezininzi ezinomdla! Unokuzibonela ngokwakho ngokukhuphela ingxelo yasimahla yedemo kwiwebhusayithi yethu.
Ulawulo aluthembeki kuphela, kodwa lwanamhlanje, kuba isoftware idityaniswe phantse nawo onke amajelo onxibelelwano ale mihla kunye neendlela zobugcisa. Ukudityaniswa kwesoftware eneekhamera zevidiyo kubonelela ngolawulo oluzenzekelayo lwevidiyo kunye nokwamkelwa kwezithuthi kunye nabathengi. Ukudityaniswa kwezixhobo kwindawo yokugcina kuya kunceda ukuthintela ubusela, kwaye unxibelelwano kunye newebhusayithi kunye nePBX lithuba lokutsala abathengi abatsha. Imizila yeenqanawa iya kukhutshwa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ngelixa iingcali ziya kuba nakho ukuthatha elona nani limangalisayo kunye nokudityaniswa kwezinto-ixesha, uhlobo lokuhambisa, iimfuno zothutho, iminqweno yabathengi. Ukuhanjiswa nganye ngenkqubo yethu inokulawulwa ukusuka ekuqaleni kwayo ukuya esiphelweni. Umthumeli uya kulandela umkhondo wempahla endleleni esebenzisa iimephu zekhompyuter kunye nokugxila kwidatha yendawo. Abaqhubi, besazi ukuba bayabonwa, abayikophula indlela, ixesha kunye nemigaqo. Inkqubo yolawulo lobalo ibala iindleko, inkcitho yeenkonzo zeemoto, kunye neempahla, kusetyenziswa iifomula ezichanekileyo nezichanekileyo. Kungenzeka ngokwoluhlu lwamaxabiso ahlukeneyo, ngamaxabiso ahlukeneyo, ngokwemiqathango nganye enikezelwa kumthengi othile.
Isoftware ikuvumela ukuba uhlale usenza ngokuchanekileyo naluphi na ubalo lobuchwephesha, kuba izikhombisi zombane ziya kwenziwa ngokulula kwinkqubo yolawulo. Izithuthi ezisetyenziswa kwezothutho zinokuchazwa ngokungqinelana nedatha yomzi-mveliso, okanye unokuzikhuphelela ulwazi ngereferensi kuyo nayiphi na ifayile ye-elektroniki kwaye uyongeze kwisoftware.